ကာတွန်း မောင်ရစ် – သန္တိသုခမှာ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း … စဘီ | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း မောင်ရစ် – သန္တိသုခမှာ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း … စဘီ
ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၄
One Response to ကာတွန်း မောင်ရစ် – သန္တိသုခမှာ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း … စဘီ
catwoman on June 12, 2014 at 10:26 pm
yes it s very ugly. i hear about it from monks all the time. it s not fair
ကာတွန်း ဘီရုမာ - အဘတွေရဲ့ အမှာစာ ...
Ku Mo Jo - The face of ....
ကာတွန်း okkw ရဲ့ ငါလွှတ်ပေးတာ သူတို့မသိ ...